2.020 waxaad awoodi doontaa inaad yeelato akoon bangi Google | Androidsis
Sanadka 2.020 waxaad awoodi doontaa inaad lahaato xisaab bangi Google
Sida aad maqashay. Google ayaa si rasmi ah u shaacisay inay si buuxda u bilaabayso suuqa dhaqaalaha wuxuuna damacsan yahay inuu qayb ka noqdo ganacsiga bangiyada. Mashruucii Google-ku soo galay aduunkan waxa uu ahaa lagu baabtiisay magaca "Cache". Magac u eg in dhawaan aan la qabsan doono maqalka.
Sida ay Apple u samaysay alaabteedii ugu dambaysay ee lagu soo bandhigay qaabka credit card-ka Apple Card-keeda. Google waxa ay u isticmaali doontaa shirkad deymo isku dhafan dhanka dhaqaalaha. Cache waxay ka iman doontaa gacanta Citigroup, shirkad Maraykan ah oo wax ka tari doonta in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo ah ee qaybta.
Cache, bangiga Google ee lacagteena
Kani waa war la hadal hayay dhowr sano, ilaa ugu dambeyntii lagu xaqiijiyay magaca Cache. Waxayna u muuqatay arrin wakhti ah ka hor inta mid ka mid ah shirkadaha tignoolajiyada caalamiga ahi uu gaadhin mid kale oo ka mid ah ganacsiyada ugu faa'iidada badan adduunka sida bangiyada.
Wali ma naqaano ilaa inta uu mashruuca Cache-ku socon doono, in kastoo wax walba waxay tilmaamayaan in dhowr bilood gudahood ay noqon doonto mid dhab ah. Google ujeedadeedu tahay in ay dhaafto abuurista kaadh fudud y waxay ku talo jirtaa inay si rasmi ah isu dhisto sidii hay'ad bangi. Iyo inay awood u yeeshaan inay u soo bandhigaan macaamiisheeda xisaabaha bangiga, deymaha iyo dhammaan alaabta in baananka maanta ina siinayaa maanta.
Miyaad aamini lahayd shirkad sida Google oo kale ah inay ku shubto kaydkaaga? Heerka kalsoonida shirkadda teknoolajiyada ee cabbirka Google ay leedahay waa mid sareysa. IYO Cache, bangiga Google wuxuu caddayn karaa inuu yahay guul aan horay loo arag aduunka dhaqaalaha. Iyadoo la og yahay in sidoo kale, madaxda fikirka ee caasimadda "G" waxay ku talo jiraan inay abuuraan habab maamul oo cusub oo aan la daabicin.
Goobta lacag bixinta ee Google, Google Pay, ku dhawaad ​​100 milyan isticmaale. Wax walbana waxay tilmaamayaan waxa Mareegtan waxa hadda lagu xidhidhi doonaa xisaabaadka Google-ka. Sidaas darteed, wuxuu bilaabi karaa inuu ku shaqeeyo saldhig macmiil oo xaasid ahTaasi waa sababta Citigroup, iyo shirkado kale oo badan oo adduunka maaliyadeed ah, ay xiisayn lahaayeen Cache bilawgii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sanadka 2.020 waxaad awoodi doontaa inaad lahaato xisaab bangi Google
Meganoid 2017 wuxuu noqonayaa mid bilaash ah, laakiin xayeysiinta: waxaan ku dhex maraynaa dib u eegista